Toamasina : Jiolahy miisa telo lavon’ny polisin’ny FIP -
AccueilSongandinaToamasina : Jiolahy miisa telo lavon’ny polisin’ny FIP
Mitohy ny ezaka amin’ny famongorana ny asa ratsy ao amin’ny renivohi-paritanin’i Toamasina. Jiolahy miisa telo indray mantsy no lavon’ny polisin’ny Fip any an-toerana taorian’ny fifanenjehana sy ny fifampitifirana mahery vaika nisy teo amin’ny roa tonta omaly, tokony ho tamin’ny 05 ora maraina. Araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana dia avy nanafika tokantrano-na mpandraharaha iray tao Analakininina Hopitaly Be ireo olon-dratsy ireo sy ny namany ny alatsinainy lasa teo tokony ho tamin’ny 07 ora hariva. Efa-dahy no nanatanteraka ny asa ratsy tamin’izany ka nisaron-tava ny iray tamin’izy ireo. Ny telo no nihanika tamboho, raha toa ka niandry teny ivelany nijery ny manodidina kosa ilay iray faninefany. Ankoatra ny fampihorohoroana ny niharan-doza tamin’ny alalan’ny basy poleta miisa roa teny am-pelatanan’izy ireo, dia lasan’ireo jiolahy ihany koa ny lavanila masaka milanja 22 kilao tao an-toerana.
Tsy nisy kosa ny aina nafoy na ny naratra. Nitari-dositra nitsoaka avy hatrany moa ireo jiolahy vao azony izay notadiavin’izy ireo. Tetsy ankilany, dia niezaka nampandre ny mpitandro filaminana faran’izay haingana kosa ireo voatafika mba ahafahana manao ny fanarahan-dia. Natomboka tamin’ny fanaovana savahao ny toerana manodidina rehetra ny fikarohana tamin’io alina io, ka voasambotry ny polisin’ny Fip tao Mangarivotra ny iray tamin’ireo olon-dratsy omaly vao maraim-be. Tamin’ny alalan’ity farany indray avy eo no nahatrarana ny roalahy namany tao an-tranony tao Tsarakofafa. Vantany vao nahita ny fiavian’ireo mpitandro filaminana moa ireo jiolahy dia nitifitra avy hatrany, ka saika niantefan’ny balan’izy ireo ny iray tamin’ireo manam-pahefana izay nitarika ny hetsika. “Tsy nipoaka ilay basy fa nitsatoka tao anatiny ny bala ka tsy tafavoaka tety ivelany “, hoy ny voalaza. Ho fiarovan-tena, dia namaly ihany koa ireo manam-pahefana ka lavo tamin’izany ireo jiolahy roalahy. Teo am-pikasana handositra kosa no maty voatifitra ilay fanintelony. Marihina fa mbola hita tao an-tranon’ireo mpanao fanafihana mitam-piadiana, ireo lavanila voaroba ka efa naverina any amin’ny tompony.
Rehefa nandeha moa ny fanadihadiana mahakasika ireto olon-dratsy voatifitra ireto, dia fantatra fa jiolahy ikoizana sy efa tena raindahiny amin’ny resaka fakana an-keriny sy fanafihana mitam-piadiana ao amin’ity renivohitr’i Toamasina. Ny taona 2017 izy ireo no efa nifampitadiavan’ny mpitandro filaminana ary izao lavo izao. Isan’ny asa ratsy nandraisan’izy ireo anjara farany ohatra ny niseho tany Ankirihiry, ny 28 mey lasa teo, izay namoizan’ain’olona iray. Isan’ny faritra mafana amin’ny resaka asa ratsy maro isan-karazany ity renivohi-paritany Atsinanana ity. Tsy menatra ny mandatsaka aina ihany koa ireo jiolahy, izay isan’ny tena mampihorohoro ireo mponina any an-toerana.